Iyo itsva vhezheni yeFirefox 86 yakatoburitswa uye inounza dziviriro yakazara kubva kukuki | Kubva kuLinux
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 86 yakatoburitswa uye inounza dziviriro yakazara kubva kukuki
Mozilla yakaburitswa Mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kweshanduro itsva 86 yeFirefox browser , que inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana, bug fixes uye kunyanya mamwe mabasa matsva.
Pazvinhu zvese zvitsva zvinounzwa, shanduko hombe inoreva kuvanzika uye kuchengetedzwa kwedata. Mozilla yakaisa chinhu chinofanirwa kuita kuti zvikwanisike kumakuki kuteedzera vashandisi.
Nezve makuki, Mozilla yakanga yatoshandisa kumwe kushanda mushanduro 85 kubva kubhurawuza rako. Firefox 85 yakaburitswa ine super cookie chengetedzo yekudzivirira kudzivirira yakavanzika trackers kubva mukutevera zviitiko zvevashandisi veFirefox vachiri kuongorora internet.
Iyi nzira yekuzviparadzanisao haibvumidze kushandiswa kwemakuki kuteedzera kufamba pakati pesaitisezvo makuki ese akaiswa kubva kumatatu-bato anovharirwa kune saiti izvozvi zvave kubatana neiyo huru saiti uye hazvitapurirwe kana mabhureki aya awanikwa kubva kune mamwe masaiti. Sezvakasiyana, kugona kwemakuki pakati pesaiti kwakasiirwa masevhisi asina hukama nekutevera kwevashandisi, semuenzaniso, anoshandiswa kwega kusimbiswa.
Imwe ruzivo inoratidzwa mune iyi nyowani vhezheni yeFirefox 86 ndiyo kugona kuona akawanda mavhidhiyo kamwechete mu-pikicha-mu-pikicha modhi. Asati vhezheni 86, kuyedza kutarisa imwe vhidhiyo yakazoparadzanisa yekutanga.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo interface nyowani yakavhurwa kuti utarise gwaro usati wadhinda kune vese vashandisi uye kusangana pamwe neprinta system yekugadziriswa kwapihwa.
Iyo nyowani nyowani inoshanda nekufananidza neyemuverengi maitiro uye inotungamira mukuvhurwa kwekutarisa mune yazvino tebhu, kutsiva zviripo zvirimo. Rutivi rwepadivi runopa maturusi ekusarudza purinda, kugadzirisa marongero epeji, kushandura marongero ekudhinda, uye kudzora kana misoro uye kumashure zvakadhindwa.
Tinogona zvakare kuwana izvo kupa mashandiro eCanvas uye WebGL zvinhu zvakaendeswa kune zvakasiyana maitiro inotarisira kuburitsa mashandiro kuGPU. Iko shanduko yakavandudza zvakanyanya kugadzikana uye mashandiro emasaiti anoshandisa WebGL neCanvas.
Pamusoro peiyo mitsva muFirefox 86, 25 kudzvinyirira kwakagadziriswa, kweiyo 18 yakaratidzirwa sengozi, 15 kudzvinyirira (yakanyorwa yeCVE-2021-23979 uye CVE-2021-23978) inokonzerwa nematambudziko ekurangarira senge buffer inoputika uye kuwana kune dzakatoburitswa ndangariro nzvimbo. Matambudziko aya anogona kutungamira mukuitwa kwekodhi yekurwisa kana uchivhura mapeji akagadzirwa.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa izvo mune beta vhezheni yeFirefox 87 simba rekudzima backspace kiyi mutyairi inosimbiswa default kunze kwechimiro chemafomu ekupinza. Kubviswa kweanobata kunotsanangurwa nenyaya yekuti iyo Backspace kiyi inonyatso shandiswa pakunyora mafomu, asi kana fomu yekuisa iri kunze kwekutarisa, inorapwa sekunge yaenda kune peji rapfuura, izvo zvinogona kukonzeresa pakuraswa kwe typed zvinyorwa nekuda kwekufamba kusingaite kune rimwe peji.
Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 85 paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Iyo itsva vhezheni yeFirefox 86 yakatoburitswa uye inounza dziviriro yakazara kubva kukuki
Zvakanaka, zvese izvo zvinotonhorera, asi zvingave zvirinani kuti vashande nekumhanya kwayo. Ndivanaani vanobva vanyunyuta kuti vanofanira kudzinga vanhu vasina mari, nezvimwe. Firefox yanga iri nesu kwemakore mazhinji kuitira kuti igone kuve yakavandudzika muchinhu icho, ndinorevei? Zviri nyore, mune chero Linux distro, nekuti ini ndinongoshandisa Linux uye ini ndakavaedza vese. Ini ndinoshandisa xfce uye ndinofarira kuve nezvidhori mubharaki rebasa nekamwe mbeva mbeva. Zvakanaka, ini ndinongobaya pane iyo Chrome icon uye inovhura ipapo uye neFirefox, aiwa, ndinoipa uye ndinofanira kumirira kuti ivhure, hongu, anongova masekonzi mashoma, asi ndinofanira kumirira uye neChannel zviri ipapo , sekunge mushure mekufamba kuri kukurumidza zvakanyanya neChannel. Hongu, Chrome ichandisora, saka ngaandiongorore, ndichafara mukutsinhana nezvazvinondipa, kumhanya kunge mheni. Nemakore ayo Firefox yanga iri, zviri zvekuti ivo vaive parutivi maererano nekumhanya uye zvirokwazvo dai vaive vanetsekana nazvo, vangadai vari pamusoro pe Chrome maererano nekushandiswa kwemusika. Dambudziko reFirefox nderekuti havana kubvira vakwanisa kubata izvo zvavainazvo mumawoko. Firefox yaitovepo pakabuda Chrome, uye nei Chrome yakasimuka semoto wemusango uye zvichingobvira payakabuda yakava browser yakanyanya kushandiswa pasi rese uye nanhasi? Nyore, nekuda kwekumhanya. Saka iwe watovepo uye bhurawuza idzva rinongoerekana rauya uye rinotanga kutanga pasirese nekukurumidza uye hapana kana chaunoita? Zvakanaka izvo.
Australia inobvumidza imwe nyowani inomanikidza Google neFacebook kubhadhara nhau
Kukadzi 2021: Izvo zvakanaka, zvakaipa uye zvinonakidza zveMahara Software